Wakiilka Xarakada Shabaab ee Gobolka banaadir oo ku Hanjabay in ay sii Wadayaan Dagaalada ay kula Jiraan Amisom. | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / WARARKA CAALAMKA / Wakiilka Xarakada Shabaab ee Gobolka banaadir oo ku Hanjabay in ay sii Wadayaan Dagaalada ay kula Jiraan Amisom.
Wakiilka Xarakada Shabaab ee Gobolka banaadir oo ku Hanjabay in ay sii Wadayaan Dagaalada ay kula Jiraan Amisom.
Posted by: Warqabad in WARARKA CAALAMKA February 8, 2013	Comments Off on Wakiilka Xarakada Shabaab ee Gobolka banaadir oo ku Hanjabay in ay sii Wadayaan Dagaalada ay kula Jiraan Amisom.
Wakiilka Xarakada Shabaab ee Gobolka banaadir Shiikh Cali Maxamed Xuseen oo war bixin siiyay Idaacadda ku hadasha Afka Xarakada Shabaab ayaa sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan Cadowga ku soo duulay Dalka Soomaaliya inta ay dalka ka saarayaan.
Wakiilka ayaa sheegay in Cadowga soo Duulay ay ugu tagayaan meel walba oo ay ku sugan yihiin isla markaana ah kula dagaalamayaan isagoona sheegay in God walba oo ay galaan ay ugu tagayaan kulana dagaalamayaan.
Shiikh Cali Xuseen ayaa soo qaatay Qarixii Is miidaaminta ahaa ee dhawaanta ka dhacay agagaaraha Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya taasoo uu sheegay in ay tahay Tusaale kaga filan awoodooda ku aadan meel walba oo uu Cadowgu ku jiro in ay tagayaan qaraxyana ka fulinayaan.
Wakiilka ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday qarax Maalinimadii shalay ka dhacay agagaaraha Isbitaalka banaadir kaasoo uu sheegay in ay iyagu ka danbeeyeen isla markaana ay la beegsadeen Kolonyo Gaadiidka Amisom ah ooh al;kaa marayay isagoona sheegay in halkaas ay ku dileen Ciidamo ka tirsan kuwa amisom.
Wakiilka oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan in ay qayb qaataan Dagaalka Jihaadka ah ee lagula jiro Ciidamada Cadowga ah ee dalka ku soo duulay isla markaana ay ka qayb qaataan dagaalka ay wadaan Xarakada Shabaab.
Si kasta ha ahaatee hadalkan Wakiilka Xarakada Shabaab ayaa imaanaya xilli maalintii shalay Qarax ka dhacay inta u dhaxaysa Isbitaalka Banaadir iyo Bangiga Dhiiga oo gaystay Khasaare soo gaaray Dad agagaarahaas ku sugnaa.
Previous: Maamulka Degmada Boon Dheere oo ka War Bixiyay Ol Olaha Nadaafadda Degmadaas.
Next: Ra’iisal Wasaaraha oo qaabilay wafdi ka socday dalka Burundi